I-TI idibene nomxhasi omdala waseFrerell ngenxa ye-albhamu yakhe yesithoba, i- Paperwork . Kwintetho ye-Aprili 2014, uTip uthi uthe wabiza ngokuba yi-albhamu kuba iphepha "ligosa," "ingxaki," kwaye "yinyani," kwaye "umculo uphasa le ngcamango kakuhle. Kodwa iPhepha ngokwayo iqoqo eliqinileyo leengoma ezingekho ukuhambelana okwenza ukuba ama-albhamu akhe angaphaya.
Kukho ininzi yamagugu kule albhamu, ngokukodwa ngasekuqaleni nasekupheleni.
"UKumkani" uvula ukuvula; ngeengqungquthela ezibandayo njengaye "" Uthi unomsindo, bacinga ukuba uyathandwa / akunjalo 'ukugcina i-lil' pa'tna kwi poppin 'ya, u Illy. "
Ezinye izinto eziphambili ziquka "G S-t," esebenza ngokuyinhloko ngenxa yamazwi avuyokileyo eWatchTheDuck, ethi "Mayelana neMali," kunye neTip kwi-swag-tastic yakhe engcono, kunye ne "New National Anthem", icala lomntu.
Izinto zihlambalaza kumzila we-5, "Hayi," kwaye uhlale ungahambelani kude kube neengoma ezimbini zokugqibela kwi-albhamu. Ngelixa i-Tip yathi yena kunye noFerrell bebezisa i-twist entsha kwizinto eziqhelekileyo, iingoma ezinjengokuthi "Ewe," "I-Jet Fuel" kunye ne "At Yazi Ubungozi Bakhe" ziphinde zihlaziye iimxholo ezindala eziye zawulawula umculo we-rapper iminyaka eyi-13. Siyazi ixesha elide ukuba iTip ngumntu omileyo, akayi kuthatha kwaye angabamba intombazana yakho.
Iingoma ezinjenge-"king gettin" imali xa ibhankini ivaliwe "kwaye" siyaphalazela, i-gasin 'igesi, ukhula lokhula' lubuhlungu bubuhlungu kumbukisi onamandla okuninzi.
Kwixesha elidlulileyo, i-Tip yakwazi ukudweba intambo efanayo phakathi kweendlela ezahlukeneyo kunye nokuvakalelwa kunye kunye netoni kwi-albhamu nganye.
Kodwa iPhephapthi yenza ukuba kucace ukuba iTI iyaqhubeka nokunyamekela kwakhe ukuzama ukukholisa wonke umntu ngexesha elilodwa, kwaye ngenxa yoko, iingoma ezinjenge "Jet Fuel," kunye nomxhwele othi "Nge-My Issue" ayivumi ngathi kufuneka i-albhamu efanayo.
Ngokufanayo, umculo uqinile kodwa unqanyuliwe. UFerrell uvelisa iziqulatho ezininzi, kubandakanywa ithrekhi yesicatshulwa esiphantsi kunye ne-funky "G Sh-t," kodwa naye uhluleka ukukhupha "Hayi Ewe." Nangona i-Mars inika ulungelelwano lokumkani ngokuvulwa, uqalekisa i-albhamu kunye ne-spacy ebuhlungu "KwiYa Own Risk." Naluphi na umzekelo, umculo ukhululeke ngokubanzi, obangela ukuba i-jolt esuka kwimizila ukuya kwiihlandlo eziliqela.
Iphepha lePhepha lilungele xa iTI ibamba ubunzulu. "Hlalani" ngumthandazo onomphefumlo kumfazi wakhe, ngelixa umxholo wecandelo ufumanisa iThip ngokucokisekileyo ngokukhumbula imihla yakhe njengenkwenkwana e-A. Iingoma ezimbini zokugqibela, "Ukukhanya 'Em Up (RIP Doe B)" kunye "Yakho Intliziyo Yiya (Uphule Umphefumlo Wami), "ubonise ubungqina bokungathembeki kokungathembeki kubo abahlobo abasweleyo baze bavalelwe. Ezi ngoma zibalaseleyo kuba zivakalelwa njengeTI empeleni zithetha oko akubethayo, kunokuzama nje ukuzama ukubeka oko acinga ukuba abantu bafuna ukuva.
Xa efuna ukuba, TI
kusengomnye wabakhweli abahle kakhulu . Ukuhamba kwakhe kusemgangathweni ophezulu, usasaza ubuhlungu, kwaye ezininzi iingoma kule albhamu ziyavuya. Ngelishwa, kuninzi iingoma ezinyanzelekileyo kwiPhepha ye-albhamu ukuba ihlaselwe ngokupheleleyo.
Iingoma ezi-10 eziphezulu zeeNtshi zeeNtshi
Iifayile ze-4 4AD eziphezulu
Imbali ye-Transgender amalungelo e-United States
1984, iSht Summary